- - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE The
TELES RELAY 20 February 2019
Ciidan cusub ayaa qaabeynaya Maraykanka
20/02/19 à 12h07
Ka dib markii Ronald Reagan uu caanka yahay Star Wars ee sanadaha 80, Donald Trump wuxuu doonayaa ciidankiisa. Madaxwaynaha Maraykanka ayaa bilaabay inuu soo saaro.
Waa in loo yeedhaa "Space Force" waxayna noqon doontaa laanta lixaad ee ciidamada Mareykanka. Bishaan Febraayo 19, Donald Trump ayaa waydiistay Pentagon in ay abuurto biil ay ku hirgeliso ciidan cusub oo bannaan. Ujeedada ugu muhiimsan ee cidda u noqon lahaa, sida uu sheegay madaxweynaha Maraykanka, si ay u ilaaliyaan satalayt weeraro guriga, haddii jireed ama habab kale, sida jabsiga ama faragelin. Hase yeeshee, sidoo kale waxay sii socon kartaa, dardaaranka oo tilmaamaya in "Force Space" ay yeelan doonaan qaab hawleed ah oo muhiim ah oo aad u ballaaran. Sida laga soo xigtay doonista Trump, NASA ma aha lug mashruuca meel this military laakiin waxay u muuqataa in ay waafajiyaan la doonista Madaxweynaha.
Si kastaba ha ahaatee, codadihii qaarkood ayaa wali kor u kacay, sida kii hore ee astronaut Mark Kelly, oo ku dhawaaqay, bishii June, inuu helo fikradda "Nacaska jidkiisu"isaga oo ku doodaya in Ciidamada Cirka ee Maraykanku horay u haystaan ​​Xeebta Xeebta, inay ku soo oogaan ama ka yaraadaan isla hal-marinta qaab dhismeedka cusub. Teaser Kelly weydiiyay hadii uu noqon lahaa caqli lahayn si ay u abuuraan unug toddobaad military u go'ay oo kaliya in ay quusta iyo wac "xoog berkedda weyn ka hooseeyey." Qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka Mareykanka ayaa sidoo kale muujiyay walaac dhab ah oo ku saabsan maalgashiga dadweynaha ee loo baahan yahay in lagu dhejiyo hubkan cusub ee hubka ee Uncle Sam.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/force-spatiale-donald-trump-se-precise-n84125.html
Tilray waa kiiska ugu taajirsan ee aan weli isku deyin in uu jebiyo suuqa Maraykanka ee CBD
Restaurant. Mulkiilayaasha cusub ee Terrace waxay ka yimaadaan Mexico